လျှပ်စစ်မီတာခ ပုံမှန်ထက် ပိုကျနေမှုရှိနေလျှင် သတိပြုရန် – Burmese Online News
လျပ်စစ်မီတာခများ သက်သာရေး ပြည်သူများထံ အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူ ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ပြောင်းလဲသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများနှင့် လိုအပ်သလို ချင့်ချိန်သုံးစွဲနိုင်ရန် အသိပေးကြေညာထားသည်။
(1) မိမိအိမ်ရှိ မီတာအား ပထမတစ်ရက်၌ အချိန်တစ်ခု မှတ်သား ဖတ်ရှုကာ မီတာပြဂဏန်အား မှတ်သားပါ။(2) ဒုတိယနေ့ နောက်ရက်၌ ပထမရက်တွင် ဖတ်ရှုခဲ့သည့် အချိန်တွင် ထပ်မံ ဖတ်ရှုကာ မီတာပြဂဏန်းအား မှတ်သားပါ။(3) ဒုတိယရက် ဖတ်ရှုထားသည့် ဂဏန်းမှ ပထမရက် ဖတ်ရှုထားသည့် ဂဏန်းအား နှုတ်ကြည့်ပါ။ ရလာသော အဖြေသည် မိမိအိမ်၏ တစ်ရက် ပျမ်းမျှ အသုံးယူနစ် ဖြစ်ပါသည်။(4) ထိုအဖြေအား ၃၀ နှင့်မြောက်၍ ရသောအဖြေသည် မိမိအိမ်၏ (၁)လ ပျမ်းမျှအသုံးယူနစ် ဖြစ်ပါသည်။(5) အဆိုပါ (၁)လ ပျမ်းမျှ အသုံးယူနစ်အား ယခုဈေးနှုန်း အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်း ငွေသင့်ကြည့်ပါ။ ရလာသောအဖြေတွင် ၅၀၀ ကျပ် ပေါင်းထည့်၍ ထွက်လာသည့် ငွေပမာဏသည် စုစုပေါင်း ပေးဆောင်ရမည့် တစ်လ ပျမ်းမျှ ကျသင့်ငွေပင် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ထို့ပြင် (မီတာပြဏဂန်းဖတ်ရှုရာတွင် အိမ်သုံးမီတာများ၌ Analog မီတာများတွင် နောက်ဆုံး (အနီ)ကွက်ရှိ ဂဏန်းသည်ဒဿမ ဖြတ်ရမည့်/ထည့်သွင်းဖတ်ရှုရန် မလိုသည့် ဂဏန်းဖြစ်ပြီး Digital မီတာများတွင် တပါတည်း ဒဿမဖော်ပြပါရှိပြီးဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် အိမ်သုံးမီတာများတွင် နောက်ဆုံး ဂဏန်းကို ဖြုတ်၍ ဖတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်သည့်အပြင် (၁)ယူနစ်ဆိုသည် ၁၀၀၀ ဝပ် ကို ၁နာရီကြာ သုံးပါက မီတာ ၁ယူနစ် တက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့်
အိမ်တစ်အိမ်တွင် ၂ ပေမီးချောင်း ၃ ချောင်း သုံးသည်ဆိုပါလျှင် ၂၀ ဝပ်ရှိသည့်အတွက် ၃ ချောင်း ၆၀ ဝပ် ၁နာရီထွန်းထားလျှင် (ဝ.၀၆) ယူနစ် တက်ပါမည်။ တစ်နေ့လုံး မပိတ်ပဲ ထွန်းထားပါက တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီရှိသည့်အတွက် (၁.၄၄)ယူနစ် တက်ပါမည်။တစ်လလျှင် (၄၃. ၂)ယူနစ်ခန့်် တက်ပါမည်။ မီးပူ(အသေး) ၇၅၀ ဝပ်ခန့် ရှိ၍ တစ်ရက် ၁ နာရီ တိုက်ပါလျှင် (ဝ.၇၅)ယူနစ် တက်မည်ဖြစ်ပြီး။ တစ်လလျှင် (၂. ၂၅)ယူနစ်ခန့်် တက်ပါမည်။ ထမင်းပေါင်းအိုး(အသေး) ၇၅၀ ဝပ်ခန့် ရှိ၍ ၁-ကြိမ် ချက်လျှင် (၄၅)မိနစ်ခန့် ကြာတတ်၍ (ဝ.၅၆)ယူနစ် တက်ပါမည်။ တစ်ရက်လျှင် ထမင်း ၂ကြိမ်ချက်ပါက (၁.၁၂)ယူနစ် တက်မည်ဖြစ်ပြီး။ တစ်လလျှင် (၃၃.၆)ယူနစ်ခန့် တက်ပါမည်။ အကြော်အိုး(ဒယ်နီ)အကြီး တစ်လုံး ၁၀၀၀ ဝပ်/ အသေး တစ်လုံး ၇၀၀ ဝပ်ခန့်ရှိ၍ အသေးနှင့်ချက်သည်ဆိုပါစိုိ့ တခါချက်လျှင် ၁နာရီကြာပါက (ဝ.၇)ယူနစ် တက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်ချက်ပါက (၁.၄)ယူနစ်တက်မည်ဖြစ်ကာ တစ်လလျှင် (၄၂)ယူနစ်ခန့် တက်ပါမည်။
ရေမော်တာ (1Hp) ၁ကောင် မော်တာဖြင့် တစ်ရက် ၁နာရီ ရေတင်ပါက ၇၄၆ ဝပ်ရှိ၍ (ဝ.၇၄၆) ယူနစ် တက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်လလျှင် (၂၂.၃၈)ယူနစ်ခန့် တက်ပါမည်။ ၃မိနစ် ရေနွေးအိုး ၁၅၀၀ ဝပ်ခန့်ရှိ၍ ရေများလျှင် ဆူရန် ၅ မိနစ်ခန့် တည်ရပြီး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် တည်ပါက (၀. ၂၅)ယူနစ် တက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်လလျှင် (၇.၅)ယူနစ်ခန့် တက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) မီးပူတိုက်ခြင်း = ၂၂.၅၀ ယူနစ်
(၆) ရေနွေတည်ခြင်း = ၇.၅၀ ယူနစ် စုစုပေါင်း = ၁၇၁.၁၈ ယူနစ် ဖြစ်ပါမည်။ငွေသင့်သော် –
၁၅၁ မှ ၁၇၁ ယူနစ် = ၂၁ ယူနစ် x ၁၂၀/- = ၂၅၂၀/- စုစုပေါင်း = ၁၄၀၇၀/- ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အသေးများနှင့် အချိန်အနည်းဆုံးနှင့် မဖြစ်မနေသုံးစွဲရန်လိုသည့် ပစ္စည်းများဖြင့် တွက်ချက်ထားခြင်း များဖြစ်ပြီး၊ Aircon / အဝတ်လျှော်စက် / ပန်ကာ / ရေခဲသေတ္တာ နှင့် အခြား ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
သိုိ့ပါ၍ မိမိနေအိမ်တွင် (၁)လ ကျသင့်နိုင်သည့် ငွေပမာဏအား ကြိုတင်ချိန်ဆတွက်ချက်ကာမလိုအပ်သည်ကို ပိတ်/ လိုအပ်သည်ကိုသာ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ချင့်ချိန်သုံးစွဲကာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မျှတ/ မီတာခအတွက် အပန်းမကြီးကြရစေရေး အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
မွန်ပြည်နယ်မှာ နဂါးရုံဘုရားတည်ပြီး သိန်း (၅၅၀) ဖိုး မွေးနေ့အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး